Ihe edemede Andrew Taylor na Martech Zone |
Edemede site na Andrew Taylor
Andrew hụrụ ọrụ n'anya arụsị na-enyere ndị ụlọ ọrụ aka ma na-enyeghachi ndị obodo WordPress. Dịka onye nrụpụta web, Andrew jiri oge ya rụọ ọrụ buru ibu maka ndị ahịa dịka AMC Networks, Frito Lay, National Van Lines, na ndị ọzọ. N'ihe karịrị afọ 8 nke ahụmịhe mmepe weebụ, ọkachamara na WordPress, ọ bụ onye ọkachamara n'oge ochie.
Etu esi etinye WordPress na Pantheon
Na Mọnde, Nọmba 21, 2017 Andrew Taylor
Ebe nrụọrụ weebụ gị bụ otu n'ime akụ azụmaahịa gị kachasị baa uru. Ibu oge, nnweta, na ịrụ ọrụ nwere ike imetụta akara ala gị. Ọ bụrụ na saịtị gị amaliteworị na WordPress-congrats! —Ị na-aga n'ụzọ dị mma iji nyefee ahụmịhe na-enweghị ntụpọ maka ndị ọrụ gị na ndị otu gị. Mgbe ị na-ahọrọ CMS ziri ezi bụ ihe mbụ dị mkpa iji wuo ahụmịhe dijitalụ dị egwu. Họrọ onye ọbịa kwesịrị ekwesị maka CMS ahụ nwere ike ịkwalite arụmọrụ, melite oge, belata